သနပ်ခါးမေ: အမွေး ပြဿနာ :P
ဘရဏီ May 14, 2012 at 1:56 AM
တခြားနည်းတွေတော့ မသုံးဘူးဘူး ။Veet နဲ့ တော့
အခုသုံးနေတာ မဆိုးဘူး သုံးလို့ ကောင်းတယ်။
Waxing လုပ်တာ က ပထမ စစချင်းလုပ်တဲ့ အခေါက်ပဲ နာတာပါ။ နောက်အခေါက်တွေဆို မနာတော့ဘူး။
လွင်ပြင်လှိုင်းငယ် May 14, 2012 at 3:55 AM
ကိုယ်နှင့်မဆိုင်သော ပို့စ်ဆိုပေမယ့် ဗဟုသုတအနေနဲ့
ချစ်စံအိမ် May 14, 2012 at 4:34 AM
Candy May 14, 2012 at 5:16 AM
waxing တော့လုပ်ဖူးတယ်.. ကိုယ့်ဟာကိုယ်လုပ်တာလေ.. ကိုယ်က အတိုသိပ်မ၀တ်တော့ ခုဆို ဘာမှကို မလုပ်ဘူး ဒီတိုင်းထားတယ် .. ဟိ
ဒါပေမယ့် မြတ်ကြည်သုံးနေတဲ့ Chemical နဲ့ဟာ စမ်းသုံးကြည့်ချင်တယ်။ ကြောက်လည်း ကြောက်တယ်။ ကြောက်တယ်ဆိုတာ အမွှေးကြမ်းကြမ်းကြီးတွေ ထွက်လာမှာကြောက်တာကို ပြောတာ..
Candy May 14, 2012 at 5:19 AM
နောက်တနည်း ရှိသေးတယ်လေ. မြတ်ကြည်မေ့ခဲ့တာ ဖြစ်မယ်။ Epilater လေ.. အမွှေးကို နှုတ်သွားတာ။ အဲ့ဒါလည်း waxing လိုပဲ ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေ မထွက်ဘူး။ ကန်ဒီက စက်ကြီးကို ကြောက်လို့ မသုံးတာ ဟီးးးး
Nandar May 14, 2012 at 6:02 AM
Veet က အမွေးကြမ်းကြီးတွေမထွက်ပါဘူး ဒါပေမယ့် ခြေသလုံးမွေးကို သုံးကြည့်တော့ သိပ်မပြောင်သလိုပဲ။ ချိုင်းမွေးတော့ရတယ် ဒါပေမယ့် ရိတ်သလိုပဲ ခဏလေးနဲ့ပြန်ထွက်တာ။ Epilater က မိုက်တယ် တစ်ခါနှုတ်ပြီးရင် ၃ ပတ် ၄ ပတ်ပြန်မထွက်ဘူး။ သူ့ကို သုံးရင် baby powder လေး အရင်လိမ်းပြီးမှ နှုတ်ရင် လုံးဝမနာတော့ဘူး။ အတွေ့အကြုံလေးတွေ ဝေမျှသွားတာပါ ဟိ :)။
Evy May 14, 2012 at 6:08 AM
Thameesan May 14, 2012 at 6:58 AM
ဒီမှာတော့ယောက်ျားလေးတွေလည်းသုံးကြတာကြော်ငြာတွေမှာတွေ့ ဘူးတယ်။ ဒီတစ်ခါတွေ့ မှထပ်လာမန့် လိုက်မယ်။း)
မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) May 14, 2012 at 9:27 AM
မမမြတ်ကြည် တစ်ခုမေ့နေ တာသားပြောပြမယ်.
မီးချစ်လေးနဲ့ရှို့ ပေးလိုက်..ခိခိ..တိန်..လိုက်ရိုက်လို့ ပြေးပြီ...
ကြားဖူး၊ ဖတ်ဖူးတာ Cream တွေ က Chemical တွေ အများကြီး ပါတဲ့ အတွက် မိန်းကလေး အတွက် မသင့်တော်ပါဘူး တဲ့ ..
အဲ့ဒါကြောင့် cream တော့ အားမပေးဘူး ..း))
သဘာဝ အတိုင်းလေးပဲ ကောင်းပါတယ် . :D:D
khin yamone May 14, 2012 at 10:48 AM
အစ်မရဲ့မေးထဲကိုရောက်ဘူး..အခု facebook ကနေ တွေ့လို့လာရေးထားတာ..
မေးကိုထပ်ပြီး sumit လုပ်တော့လည်း အစ်မရဲ့မေးက ရှိနေပြီးသားတဲ့..
san htun May 15, 2012 at 6:25 PM
camomile May 16, 2012 at 8:00 AM
Veet သုံးကြည့်အုံးမှ တခါမှမသုံးဖူးဘူး
Waxing ကိုတော့ကြောက်တယ် အရမ်းနာလို့း)
သဉ္ဇာ - Thinzar May 16, 2012 at 11:35 PM
နောက်ထပ်.. ကြော်ငြာတွေထဲမှာ "smooth away hair removal pad" ဆိုတာ တစ်ခု တွေ့မိတယ်.. သူ့ရဲ့ youtube link အရတော့ သုံးရတာ လွယ်မယ့်ပုံဘဲ.. မသုံးကြည့်ရသေးဘူး..
ဖြိုးဇာနည် May 17, 2012 at 10:20 AM
အိမ်မက်စေရာ May 19, 2012 at 7:38 AM
အိမ်မက်လဲ veet သုံးဖူးတယ်..
အိမ်မက်မရောက်ဖြစ်လဲ မြတ်ကြည်လေးက အမြဲလာလည်လို့ ကျေးဇူးပါနော်..
မြရေလျဉ် May 21, 2012 at 2:17 AM
နောက်တစ်နည်းက ကျောက်ချဉ်ကိုကြိတ် ရေသန့်ဗူးအသေးထဲမှာ ရေနဲ့ေ၇ာထား
သနပ်ခါးလိမ်းပြီးတိုင်း သွားပွတ်တံလေးကို ဗူးထဲနှစ်ပြီး ဂျိုင်းကိုယူလိမ်းတာလဲ အဆင်ပြေပါတယ်။
ချိုင်းမွှေးရော ချိုင်းချွေးနံ့ကိုရော လျော့စေတယ်။
( ဗူးနဲ့ထည့်ပြီး သွားပွတ်တံနဲ့သုံးတာက ကျောက်ပျဉ်မှာ မသွေးရအောင်ပါ။ မျက်နာကိုမတော်လို့ လိမ်းမိရင်ကျောက်ချဉ်က အသားကြမ်းတတ်ပါတယ်တဲ့) ။
မြ လက်တွေ့သုံးနေတာကို ပြောတာပါ အစ်မ။
သက်ငယ်စကား ၊သက်ကြီးကြားဆိုသလို ဖတ်မှတ်သွားတယ်..မြတ်ကြည် :P